Isitudiyo seGannet - I-Airbnb
I-Whale Watcher House inikezela ngokungaqhelekanga kwicala lolwandle, indawo yokuhlala ebekwe kakuhle, ngaphakathi kwemizuzu engama-40 yokuqhuba iSt. John's - eSt. Yenye yezindlu ezintathu ezizimeleyo ezisecaleni kolwandle kolu luntu luncinci luhle. Jonga iLoon kunye nePuffin kwindawo enye- zonke ngaphakathi kwi-Air BNB. Ukuhamba nabantu abongezelelweyo-iPuffin inokongezwa kwigumbi lokulala elinesibini, igumbi lokuhlambela ezimbini - qhagamshelana nomninimzi ngeenkcukacha.
I-Gannet yindlu yesitudiyo segumbi elinye ethi nangona inoqoqosho esikhaleni, ibonelela ngazo zonke izinto eziluncedo.
Igumbi lokuhlambela elineshawari enkulu
Indawo yekhitshi ene-microwave, ifriji, itoaster, umatshini wekofu, njl.
Umnyango wePatio ukuya ngasese, umgangatho omkhulu onezitulo zepatio kunye ne-BBQ
Zonke izinto eziluncedo ekhitshini - iimbiza, iipani, izitya, njl.
Zonke izibonelelo zelinen - iishiti kunye neetawuli
Indawo yokutyela enetafile, izitulo ezi-2
I-TV enenkonzo yentambo
Intsimbi kunye nebhodi
Indawo eninzi ye-closet
Iihuka zeempahla zokomisa iimpahla zabahambi
I-Whale Watcher House, enezindlu zayo zokuziphekela, ikwimizuzu nje engama-40 ngaphandle kwesixeko esizityebi senkcubeko yase-St. Yintoni eyenza iWhale Watcher House ibe yodwa kukuma kwayo okungaqhelekanga kwingxondorha ejonge iWitless Bay Ecological Reserve. Xa iminenga ikwixesha lonyaka...iyaphefumla! Xa ii-icebergs zilixesha lonyaka ekupheleni kwentwasa hlobo.....ubuhle! Ukubukela iintaka eNewfoundland...intabalala! Kwaye konke kulungile kwidesika yakho.
Ndingumsebenzisi wendawo yokuhlala ekudala ndimi- ndiseNewfoundlander, umhambi, owayesakuba semkhosini, owayesakuba malunga nayo yonke into!
Kwaye ndiyayithanda le shishini - le ndlu ... olu nxweme .... esi siqithi ... kunye naba bantu. Injongo yam ekunikezeni ikhefu kukuba unayo kanye loo nto-indawo yokuphefumla ... ungahlaziya iibhetri zakho ngokuhamba okusekwe ekuhlaleni, ukuhamba, ukuqubha, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ibhayisekile, ukutya....okanye uphumle kwidesika yakho ngento elungileyo. incwadi...okanye iseti yeebhayinotyhulathi!
Kwaye ndiyayithanda le shish…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- St. Michael's